Booliiska Kenya oo sheegay inay qabteen qof looga shakisan yahay qaraxyadii Nairobi & – SBC
Booliiska Kenya oo sheegay inay qabteen qof looga shakisan yahay qaraxyadii Nairobi &
Posted by editor on Aktoober 26, 2011 Comments
Ciidamada Booliiska Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigeen nin laga shakisan yahay oo la aaminsan yahay in uu yahay shaki laga qabaha koowaad ee qaraxyadii ka dhacay magaalada Nairobi ee dhimashada iyo dhaawaca sababay.
Booliiska waxay kaloo sheegeen inay heleen hub iyo bambooyinka gacanta laga tuuro kuwaasi oo ay ka heleen guriga qofkaasi oo u dhashay dalka Kenya.
Guriga hubka laga helay ayaa ku yaal deegaanka Kayola oo ku yaal magaalada Nairobi oo ay ku badan yihiin dadka saboolka ah, isla markaana faras magaalaha Nairobi u jira 15 KM.
Taliyaha Booliiska Booliiska Mathew Iteere ayaa sheegay in qofka laga shakiga qabo la xiray isla markaana ay heleen 13 bambooyinka gacanta laga tuuro iyo lix qori.
Dhinaca kale ciidamo fara badan oo amaanka suga ayaa lagu daadiyey wadooyinka waa weyn ee magaalada Nairobi gaar ahaan faras magaaladaha, waxaa sidoo kale amaankooda kor loo qaaday hotelada waa weyn, xarumaha dawlada ayaa loo diidey gawaarida in la hordhigo, waxaa kale oo ay ciidamadu adeegsanayaan Eeyaha wax baara.
Goobaha lagu dukaameyso, maqaaxiyaha, suuqyada waa weyn gaar ahaan Village Market, shinoomooyinka ee ku dhaw deegaanka Girgiri oo ah xafiisyada UN-ka ayaa waxaa laga baajiyey in lagu qabto dabaaldegaya loo yaqaan Halloween oo qorshuhu ahaa in sabtiada halkaasi lagu qabto sababo cabsi laga qabo in weeraro ay dhacaan.
Dadweynaha magaalada Nairobi ayaa cabsi weyn qaba, waxaana dadku ay ka fogaanayaan ama ka cararayaan goobaha la isagu yimaado ama lagu badan yahay.